Nin Doonayay Inuu Kitaabka Quraanka Kariimka Ah Hadiyad U Siiyo Tom Cruise Oo Xabsi Ku Galay | Hawraar
October 2, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Nin Doonayay Inuu Kitaabka Quraanka Kariimka Ah Hadiyad U Siiyo Tom Cruise Oo Xabsi Ku Galay
Booliska dalka Morocco ee waqooyiga afrika ku yaala, ayaa xabsiga u taxaabay nin dhalinyaro ah oo looga shakiyay inuu halis ku yahay ammaanka, aktarka wayn ee reer Hollywood, Tom Cruise kaas oo dalkaa u jooga hawlo shaqo iyo mataalada Filimkiisa taxanaha ah.
Sida warbaahintu ku warantay, Tom Cruise oo wakhtiga ninkan u soo dhawaaday la qabtay ku sugnaa, xaafad ku taala, Magaalada Rabat ee caasimadda dalkaas, laguna magacaabo, Durb Yahud, taas oo wakhtigaas Aktarka Tom Cruise dalxiis ahaan u joogay.
Ninkan reer Morocco ayaa aad ugu dhawaaday jilaaga, ka dibna salaam la boobay, laakiin waxa si deg deg ah ugu soo booday, ciidamo ilaalo ah oo goobta ku sugnaa kuwaas oo katiinadeeyay ka dibna xabsiga dhigay.
Waraysi qaatay shan saacadood ka dib markii ay boolisku xaqiijiyeen in ninkaasi kaliya jacayl uu aktarkaa, taageero darteed sidan u yeelay, isla markaana uu doonayay inuu hadiyad ahaan u siiyo kitaabka Quraanka kariimka oo afka Ingiriisiga ku turjuman, ayaa la sii daayay.
Tom Cruise ayaa todobaadkii ugu danbeeyay ku sugnaa, dalka Morocco halkaas oo uu ka qabanayay qayb ka mid ah, Filimkiisa Mission: Impossible 5, kaas oo uu hore qaybo ka mid ah ugu soo duubay, dalal kala duwan, oo waddanka Austria ka mid yahay.